I-Central Courtyard Home II (Ngasechibini) - I-Airbnb
I-Central Courtyard Home II (Ngasechibini)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguOlga
Le ndlu ikwindawo yeMolos, kumgama wemizuzu embalwa xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwinqaba, kwisikwere esikhulu kunye nezikhephe ukuya kwisiqithi. Ihonjiswe ngenkulungwane ye-19 emva kwendlu, inika uxolo, ukuzola, ukwahlukaniswa kunye nezinto ezimele zibonwe, ngeli xesha lonyaka.
Le ndlu inokufikelela ngqo kwiindawo zeemyuziyam, iindawo zokubuka nezolonwabo. Ime embindini wekota yamaYuda endala, ngaphandle kweNqaba yesixeko kwaye kufutshane ne "bell tower" edumileyo (indawo engasechibini) yokudibana kwabo bonke abatyeleli besixeko sethu. Ukuze sazise iindwendwe zethu, ngaphambi kokungena ngakunye, silandela imigaqo yokucoca ephuculiweyo KA-AIRBNB ukuze ucoceke kwaye ukhuseleke.
Kumgama weemitha eziyi-100 ukuya kweziyi-150, kufutshane nendlu, unokufumana iikhefi, iivenkile zokutyela, iibhari, umphandle, amayeza njl. Le ndlu isembindini "wolonwabo kunye nobumnandi basebusuku besixeko. Kuhambo lomzuzu kukho ivenkile enkulu, evula iintsuku eziyi-7 ngeveki.
Siza kuhlala sifumaneka, ukuze sikuncede ngexesha lokuhlala kwakho.
Inombolo yomthetho: 00001078802